Soo dejisan Xfire 2.4.4.761 – Vessoft
Xfire – software ah si ay isgaadhsiin waxaa diiradda lagu saaray ciyaartoyda ciyaarta online. software waxaa ku jira kulan badan oo noocyo iyo tirada qaababka kala duwan oo waxtar leh. Xfire waa ay awoodaan in ay soo bandhigaan ciyaaro saaxiibada heer, guulaha kala duwan ee ciyaartoyda, waqtiga joogitaanka ee kulan gaar ah iyo macluumaadka kale. peculiarity ee Xfire waa is-dhaafsiga ee fariimaha dhexe ee ciyaarta oo aan baahida loo qabo in burburto suuqa kala ciyaarta. software wuxuu taageeraa hadal cod, abuuridda of Screenshot, qabashadooda video ah inta lagu guda jiro gameplay ah, baahiyaa ciyaarta in shabakadda, iwm Xfire ku jira ka dhisay-in browser, taasi oo muujinaysa homepage oo ka mid ah kulan bilaabay liiska tirakoobka iyo macluumaad kale.
si toos ah Chat ee ciyaarta
Duubista of video ah inta lagu guda jiro gameplay ah
Soo dejisan Xfire
Faallo ku saabsan Xfire
Xfire Xirfadaha la xiriira